संक्रमितले रिकभरीको समयमा के खाने ? के नखाने ? यसो भन्छन् पोषणविद् - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ। यस भाइरसले तौल कम गराउनुका साथै शरीरलाई भित्रैदेखि कमजोर बनाउँदछ ।
यदि तपाई कोरोना भाइरसबाट पनि संक्रमित हुनुभएको छ भने तपाईले औषधीको साथ आफ्नो आहारमा पनि ध्यान दिनु पर्छ। पोषण विशेषज्ञहरूले संक्रमित भएपछि र रिकभरी हुन के खाने रु के नखाने रु भन्ने विषयमा सल्लाह दिइरहेका छन् । यस बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ ।
रिकभरीको समयमा के खाने ?
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले कोरोना रिकभरीको समयमा तपाईंको खाना हल्का हुनुपर्ने तर पोषणले भरिपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन् । तपाईले खाने खानामा भिटामिन सी, डी, खनिज र जिंक हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसले तपाईलाई कोरोना भाइरसबाट चाडै रिकभरी हुन सहयोग पुर्याउँदछ ।g
कोरोना बिरामीहरुको लागि उत्तम विकल्प पौष्टिक खिचडी हो। खिचडीमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन हुन्छ ।
हरियो तरकारी राखेर खानाले खिचडी खानाले शरीरलाई इनर्जी मिल्नुका साथै शरीरले राम्रोसँग पचाउन सहयोग गर्दछ । तपाईंले आफ्नो खानामा दाल र सम्पूर्ण अन्नहरू पनि समावेश गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् कि यस समयमा तपाईले जे पनि खानुहुन्छ, तातो खानुहोस्। चिसो चीज खानु हुँदैन।
यी चीजहरूलाई वेवास्ता गर्नुहोस्
जब तपाई रिकभरीको बेला केहि चीजहरू खानुपर्दछ, त्यहाँ केहि चीजहरूलाई बेवास्ता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । केही खाद्य वस्तुहरूले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदछ, जसले तपाईलाई कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन धेरै समय लाग्न सक्छ। अब ती खानाहरूको बारेमा जानौं।
प्याकेज गरिएको खाना
प्याकेज गरिएको खाना भोक मेटाउन सब भन्दा सजिलो विकल्प हो तर कोरोना संक्रमणका लागि यस्तो खाना तपाईलाई भारी हुन सक्छ।
प्याकेज गरिएको खानामा धेरै सोडियम र प्रिजर्बेटिट्स धेरै हुन्छ । यसको कारण शरीर सुन्निनुका साथै कोरोना निको हुन समय लाग्दछ । यी खानाले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्दछ।
कोरोनाबाट रिकभरीको समयमा खाना एकदमै सादा खानु पर्छ। यस समयमा मसलादार खाना भुलेर पनि नखानुहोस् । यस प्रकारको खानाले तपाईंको घाँटीलाई असर गर्दछ । यस बाहेक, मसलादार खानाले खोकी पनि लाग्दछ । मरिचमा एन्टि ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ जसले शरीरलाई फाइदा पुर्याउँदछ ।
तारेको भुटेको खाना
संक्रमित भएपछि व्यक्तिले स्वाद र गन्ध महसुस गर्न सक्दैनन् । रिकभरीको समयमा खानाको स्वाद बिस्तारै सुरू हुन्छ।
यस्तोमा केही मानिसलाई चट्पटे, अमिलो पिरो खान मन लाग्न सक्छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुका अनुसार यस समयमा तपाईँले आफूलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
फ्राई खानामा उच्च मात्रामा फ्याट हुन्छ र मानिसहरू प्राय जसो स्वादमा बढी खान्छन्। तिनीहरू पचाउन समय लाग्छ र यसको कारण पाचन प्रणालीमा भार पर्दछ ।
अध्ययनमा यो पुष्टि भएको छ कि तारेको भुटेको खाना खानाले पाचन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन ।
यसले खराब कोलेस्ट्रोल पनि बढाउँदछ, त्यसैले यदि तपाईं कोरोनाबाट रिकभर हुने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने, यस प्रकारको खानाबाट टाढा रहनुहोस्।
संक्रमित भएपछि र रिकभरीको समयमा तपाईंले मिठो पेय पदार्थ र सोडा पिउनु हुँदैन। त्यस्ता पेय पदार्थहरूले पेट सुन्निन्छ, जुन संक्रमितलाई रिकभरी हुन समय लिन्छ। यसको सट्टा तपाईं प्रशस्त मात्रामा कागति पानी पिउनुहोस् । कागतीले पेट सफा राख्छ र रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ, जसले रिकभरी हुन पनि मद्दत गर्दछ।